Viralheat: La socodka Warbaahinta Bulshada ee SMBs. Martech Zone
Viralheat: Kormeerka Warbaahinta Bulshada ee SMBs
Axad, Janaayo 1, 2012 Arbacada, February 10, 2016 Douglas Karr
Waxaan in muddo ahba iska ilaalinaynay adeegga la socodka baraha bulshada. Nidaamka kormeerka warbaahinta bulshada wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameysato sumado iyo ereyo muhiim ah oo aad kormeerto baraha kala duwan ee warbaahinta bulshada si aad u sheegto, dareenka iyo dhaqdhaqaaqa hareerahaas. Shirkadaha, istiraatiijiyadda kormeerka warbaahinta bulshada waxay faa'iido weyn u noqon kartaa maareynta arrimaha adeegga macaamiisha, la socoshada sida dadku u dareemayaan astaantaada, iyo u kuurgalida sida ugu wanaagsan ee xeeladahaaga bulshada ay u shaqeynayaan.
Arrintu waa qiimaha aan caadiga ahayn ee nidaamyadan! Abuuritaanka soo noqoshada istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada waxay qaadataa waqti, sidaas darteed lahadalka macmiilka oo lagu darayo barxad kumanaan kun oo doolar ah bishii waa xoogaa xad dhaaf ah. Waxaan su'aasha hordhigay qaar ka mid ah kuwa ka ganacsada baraha bulshada, "Ma jirtaa madal la jaanqaadi karta baraha bulshada? mana helin jawaabo aad u tiro badan.
Si kastaba ha noqotee, hal jawaab oo ka timid Carri Bugbee aad ayuu ii faraxsanahay. Viralheat waxay u muuqataa inay tahay kormeer baraha bulshada oo adag iyo Analytics madal loo dhisay suuqa ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah (SMB).
Waan ku faraxsanahay inaan bilaabo isticmaalka Viralheat si loo bilaabo kormeerka macaamiisha 'joogitaanka warbaahinta bulshada. Nidaamku wuxuu umuuqdaa inuu yahay mid adag oo leh astaamo badan oo taxan:
La socodka waqtiga-dhabta ah - tani waa muuqaal muhiim ah. Qaar badan oo ka mid ah nidaamyada kale maahan waqtiga-dhabta ah, iyagoo si fudud uga ururinaya xogta nidaamyada kale.
Falanqaynta saameynta si loo aqoonsado kuwa raacsan oo leh saameyn ballaaran oo saameyn ku yeelan kara ololayaasha.
Falanqaynta dareenka si loo aqoonsado niyadda mid kasta iyo xusuus kasta.
Falanqaynta fayraska si loo aqoonsado tweets-ka iyo sheegashooyinka leh awooda fayraska.
La socodka fiidiyaha in ka badan 200 oo goobood oo fiidiyoow ah.
Isdhexgalka CRM si aad ugu riixdo horseedka Salesforce ama ku soo dejiso adoo adeegsanaya Excel.
Deegaanka Geo karti u lahaanshaha xaddidaadda boggagaaga meel kasta oo adduunka ah.
Digniinta Dynamic karti si aad uga heli karto ogeysiisyo deg-deg ah meesha lagu xusay.
API - sidaa darteed waxaad ku dhexgeli kartaa xogta nidaam kasta oo dibadeed oo aad jeclaan lahayd.
Marka laga reebo astaamaha, dhinaca ugu xiisaha badan ee Viralheat waxay noqon kartaa qiimaha. Xirmadooda furitaanku waa $ 9.99 bishii oo leh astaamo aasaasi ah. Xirmo $ 29.99 bishiiba ah waxay umuuqataa inay leedahay wax walba oo ganacsi yar u baahan yahay inuu bilaabo. Xirmo $ 89.99 bishiiba ah waxaa ku jira xirmo hay'ad summad leh!
Qiimaha, tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah xirmooyinka la socodka warbaahinta bulshada ee ugu adag ee aan helay. Haddii aad ogtahay in badan oo ka mid ah barnaamijyada kormeerka ee warbaahinta bulshada ee loogu talagalay SMBs halkaas (maaha daabacaadda warbaahinta bulshada), nala soo socodsii faallooyinka. Iyo - hadaad isticmaale tahay Viralheat, waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno fikradahaaga ku saabsan nidaamka. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan uqornay xirmo gacansaar (iyo kuwani waa xiriiriyeyaasha kujira boostadan).
Tags: kormeerka goobta geokormeerka deegaankafalanqaynta saameyntafalanqaynta dareenkais dhexgalka bulshada crmwarbaahinta bulshadadigniinta baraha bulshadafalanqaynta warbaahinta bulshadakormeerka warbaahinta bulshadakormeerka fiidiyahafalanqaynta fayraskakulul
Khataraha Xoolaha iyo Qabiilooyinka
10, 2012 at 12: 55 AM
Doug, waan jabsaday markaan arkay qoraalkaaga maxaa yeelay waxaan ku helay anigoo baaraya aaladaha la socodka warbaahinta bulshada ee SMBs. Kadib waxaan magacayga ku arkay qoraalkaaga. Waad ku mahadsan tahay qaylada!
Marwalba waxaan kujira raadinta aaladaha cusub ee korjoogteynta ee awoodi kara bilowga iyo SMBs, laakiin waxay umuuqataa in Viralheat ay wali noqon karto xulashada ugufiican ee lacagta. Haddii aan la kulmo wax la mid ah, waan soo fuulaa si aan kuu ogeysiiyo.
10, 2012 at 12: 58 AM
Fadlan samee, @CarriBugbee: disqus! Weli ma aanan helin heshiis kafiican halkaas (waad ku mahadsan tihiin!) - Iyo Viralheat waxay sii wadaa inay horumariso barnaamijkooda.